दुवै पक्षको अडानले सहमतिको सम्भावना क्षीण बन्दै
काठमाडौँः राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई दोस्रो चरणअन्तर्गतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउनेबारे सत्तारुढ प्रमुख दलले अन्तिम कसरत गरिरहेका छन् । सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेस तथा प्रमुख साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) ...
राष्ट्रिय पहिचान गुमाउने कुरा मान्य हुँदैन - अध्यक्ष ओली
काठमाडौँ: नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान गुमाउने कुरा पार्टीका लागि मान्य नहुने बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धूम्बाराहीमा शनिबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने ...
खोटाङ: नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताको कुटाइबाट नेकपा (एमाले)का दिप्रुङ गाउँपालिका–३ छोरम्बुका वडाध्यक्षका उम्मेदवार इन्द्र तामाङ गम्भीर घाइते भएका छन् । काँग्रेसको झन्डा च्यातिएको विषयमा उत्पन्न विवादमा झडपमा झडप हुँदा तामाङ घाइते भएका हुन् ...
जनार्दन शर्मा कृषिका ‘जेटिए’ थिए, आफ्नै हाकिमलाई पनि टेर्दैन थिए
मदन राई एउटा सरकार ढल्यो, अर्को बन्यो । नेकपा माओवादी केन्द्रले केही मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएको छ । अघिल्लो सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका जनार्दन शर्मालाई अहिले गृहको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसो गर्नु ...
जेठ २७ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता राचन्द्र पौडेल पक्षबाट मन्त्री नियुक्रिका लागि सिरफरिस हुन लागेका चार नेतामध्ये बलबहादुर केसीलाई अस्वीकार गरेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई हुने भएको छ ।पार्टी सञ्चालनबारे ...
घरमा राजनीति पसेपछिः दाजुभाइबीच बोलचाल बन्द, पति–पत्नीको डिभोर्स
जेठ २७ । अछामको ढकारी गाउँपालिका–२, हिच्माका प्रकाश साउँद र कृष्ण साउँद एउटै घरका (सहोदर) दाजुभाइ हुन् । तर, राजनीतिक वैचारिक भिन्नताले दुई भाइबीच पानी बाराबार छ । कारण, प्रकाश कांग्रेसनिकट ...
जति गरे पनि राजपा नेपाल भाँडभैलोमै उत्रने संकेत
जेठ २७। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल १४ असारको स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्न आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको छ । केही दिनअघिसम्म दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्न सहमत रहेको ...
जेठ २६ । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बङ्गलादेशका सेना प्रमुख जनरल अबु बेलाल मोहम्मद सफ्यूूल हकले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको भेटमा उहाँहरुबीच ...
जेठ २६ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले पार्टीको हारजितलाई बेवास्ता गरेर भए पनि देशमा राजनीतिक संस्कार बसालेको बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले आज(शुक्रबार) जिल्लाको ...
मधेसमा मात्रै किन ? तह नै थप्ने हो भने डोल्पामा पनि थप्नु पर्ला कि ! (भिडियोसहित)
डा.सुनीलकुमार पोख्रेल जातीय पहिचान र स्रोत व्यवस्थापनका विज्ञ हुन् । नेपालमा जातीय पहिचान, स्रोत व्यवस्थापन र स्थानीय चुनावले यसमा ल्याउन सक्ने आधारभूत परिवर्तन तथा प्रभाव, जातीय द्वन्द्व, सिमांकन सुरक्षा र अन्य ...
प्रधानमन्त्री भन्छन्, देशमा प्रधानमन्त्री धेरै हुनु शेरबहादुरको मात्र दोष हो र ?
जेठ २६ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा भरतपुर काण्डको बारेमा बोलेका छन् । संसदमा बोल्दै उनले भनेका छन्, ‘मत च्यात्ने कुरा भरतपुरको मात्र पहिलो हैन । अदालतमा गएको कुरा हामीले बोल्न ...
जेठ २६ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो दललाई मन्त्रिमण्डलमा सम्मानजनक स्थान दिन आग्रह गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको आग्रहमा सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरिएको तर कांग्रेसले प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको ...
भरतपुरको मतपत्र सुरक्षामा ढाडे बिरालो !
जेठ २६ । स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर भरतपुर महानगरपालिका निकै चर्चामा छ । महानगरको मतपरिणामलाई प्रमुख तीन दलले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएर निर्वाचनमा होमिएका थिए । निर्वाचनपूर्व र मतदानपछि पनि भरतपुर राष्ट्रिय ...
चुनावमा जान राजपालाई कानुनी बाधा फुक्यो
जेठ २६ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपालाई चुनावको तयारीका लागि थप समय दिन भन्दै बिहीबार संसद्ले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पहिलो संशोधन गरेको छ । उम्मेदवारलाई टिकट दिने पार्टीका नेताको हस्ताक्षर ...
बुढीगण्डकीमा गलत मनसाय देखियो – डा भट्टराई
जेठ २५ । नयाँ शक्ति नेपालले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेका बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकाससम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय गलत मनसायले अगाडि बढाइएको आरोप लगाएको छ । सो पार्टीले आज(बिहिबार) त्यहाँ पत्रकार सम्मेलनको ...
विप्लवका दश कलाकार पक्राउ
जेठ २४ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका १० जना कलाकारलाई प्रहरीले मङगलबार रोल्पाको इरिवाङबाट पक्राउ गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट जलजला सांस्कृतिक परिवारका सदस्य रहेका ...
जेठ २५ । सत्तागठबन्धन दुई दल कांग्रेस–माओवादीले ११ र ९ मन्त्रालय लिने गरी भागबन्डामा लगभग सहमति भएको छ । गठबन्धनमा सहभागी लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपा, नेकपा संयुक्तलगायतका साना दललाई भने बाँकी मन्त्रालय दिने ...
गृहमन्त्री शर्माद्वारा पदभार ग्रहण, ‘पत्रिकाबाजी बन्द गरिने’
जेठ २४ । नवनियुक्त गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनले पत्रिकाबाजी गर्ने, वक्तव्य दिने वा अनावश्यक अन्तरवार्ता दिँदै हिड्ने कुरा बन्द गरिने बताउका छन् । बुधबार पदभार ...
देउवाद्वारा सदाचार नीति बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर
जेठ २४ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदभार सम्हाल्दै राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए । ...
जेठ २४ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा देउवाले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसामू पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् । ...